मुखाले भन्यो भने टुक्काले दाँत झार्ने गरी हान्छन प्रधानमन्त्री : डा. सुरेन्द्र केसी (भिडियो) – Complete Nepali News Portal
राजनीतिक विश्लेषक प्रा. डा. सुरेन्द्र केसीले केपी ओलीको अपरिपक्व शासनले गर्दा देशले गति लिन नसक्ने बताएका छन्। उनले आगामी दिन जनताहरुको लागि थप कष्टकर बन्ने संज्ञा दिएका छन्। राष्ट्र अराजकता त विफलतर्फ गइरहेको केसीको भनाई छ।